Torohevitra 3 hananganana programa marketing amin'ny chat amin'ny fahombiazana | Martech Zone
AI chatbots dia afaka manokatra varavarana hanana traikefa nomerika tsara kokoa sy hampitombo ny fiovam-pon'ny mpanjifa. Fa izy ireo koa dia afaka mampiakatra ny traikefan'ny mpanjifanao. Ity ny fomba fanitsiana izany.
Manantena ny mpanjifa anio fa ny orinasan-dry zareo dia hanolotra traikefa manokana sy takiana 24 ora isan'andro, fito andro isan-kerinandro, 365 andro amin'ny taona. Ny orinasa amin'ny indostria rehetra dia mila manitatra ny fomba fiasa mba hanomezana ny mpanjifa ny fifehezana tadiavin'izy ireo ary hamadika ny firongatry ny fifandraisana avo lenta amin'ny mpanjifa mandoa vola.
Mba hamaliana izany fangatahana izany dia orinasa maro no nitodika tany amin'ireo mpitsidika chat manan-tsaina. Chatbots dia manana fitaovana tokana hitondrana fifanakalozan-kevitra tena manokana sy eo noho eo, mahafeno ny filany ary mampandroso azy ireo amin'ny alàlan'ny dia ataon'ilay mpividy. Ny chatbot marina dia afaka mamela ny mpanjifanao hametraka fanontaniana amin'ny teny anglisy tsotra fa tsy mila manodinkodina manodidina ny pejin'ny vokatra, lahatsoratra bilaogy ary atiny azo sintomina hahitana ny valiny ilain'izy ireo. Ny paikady fifanakalozan-kevitra be pitsiny dia mety hisarika ny angon-drakitry ny mpanjifa any anaty resaka mba hahafahana manompo tsara kokoa ny filan'izy ireo ary mampandroso ny diany.
Na izany aza, ny vahaolana amin'ny chat amin'ny azy ireo dia tsy fanalefahana. Raha ny chatbots mahomby dia voaporofo fa mampitombo ny fiovam-po an-tserasera amin'ny 20 - 30 isan-jato, ny programa chat tsy dia kasaina indraindray dia mety hanimba bebe kokoa noho ny tsara. Fa rehefa misy programa chatbot kasaina tsara ary tanterahina am-pahalalana, dia manamora ny fivezivezin'ny orinasa ny mitarika haingana sy mahomby ary amin'ny ambaratonga.
1. Ataovy loha laharana ny mpihaino anao
Rehefa manamboatra ny mpanampy amin'ny chat AI ianao dia mieritrereta momba ny tsenanao. Tokony hamolavola ny maso ivoho mifototra amin'ny hoe iza no fantatrao ny mpanjifanao, ao anatin'izany ny fahazoanao ny fomba firesak'izy ireo. Tian'ireo mpihaino anao vazivazy sy hatsarana? Sa aleon'izy ireo tonga hatrany amin'ny hevitra? Raha vantany vao fantatrao hoe iza no itenenanao, dia ho azonao atao ny mamaritra ny toetran'ny maso sy ny feon'ny feonao.
Efa fantatray fa ny personalization no lakilen'ny fifandraisana amin'ny chat…
80 isan-jaton'ny mpanjifa no milaza fa mora kokoa ny mividy amin'ny orinasa manome traikefa mifanaraka aminy.
Stats 50 mampiseho ny herin'ny personalization
Betsaka ny fomba fampidirana fifandraisana manokana. Manomboha amin'ny firesahana amin'ny mpanjifa amin'ny anarany ary manontania azy ireo momba ny safidiny manokana hanampy azy ireo hiaina ny vokatrao na serivisinao ho azy ireo manokana. Arakaraka ny ahalalanao ny momba ny mpanjifanao no hahamora kokoa azy amin'ny fanamboarana ny fanohanan'izy ireo amin'ny chat.
Faharanitan-tsaina artifisialy (AI) Agent dia afaka mampiasa angona momba ny toerana hanampiana amin'ny famaritana ny toerana mety, ohatra, na hahatsiarovana ny tsingerintaona nahaterahana sy fotoana manokana hanolorana fihenam-bidy sy hafatra fankalazana manokana. Fa ny personalization dia tsy afaka mihoatra ny fifandraisana lehibe; Raha mitady fanampiana ara-teknika ny mpanjifa dia tsy tokony hanery azy ireo amin'ny alàlan'ny fantsom-pivarotana ny mpanampy anao amin'ny chat. Hamarino tsara fa hamaly ny tanjon'ny mpanjifa voalaza, na midika hoe mamaly fanontaniana mivantana na manome rohy mankany amin'ny loharanom-pahalalana mahasoa.
Fomba fanao tsara indrindra hafa ilaina amin'ny fikolokoloana resaka ny resaka fohy. Manolora valin-kaikitry ny manaikitra mba hitazomana ny làlan'ny mpanjifa fa tsy hanonitra azy ireo amin'ny safidy, ary valio ny fanontaniana ankapobeny amin'ny antsipirian'ny kaonty manokana raha azo atao. Amin'izany fomba izany, ny mpandraharaha dia hampiditra ny maha-izy azy sy ny maha-zava-dehibe azy amin'ny valiny fohy izay sady mahafaly no miandrandra ny filan'ny mpanjifa ara-potoana.
2. Mamorona resadresaka mahasoa sy mahaliana izay manova
Mba hahazoana antoka fa manampy betsaka araka izay tratra ny masoivohonao dia ilaina ny mametaka ireo resaka mety hapetraka. Alao an-tsaina ny fomba mety hisehoan'ny fifandraisana amin'ny mpanjifanao ary handrafetana mialoha ny valiny mahomby, ny faran'ny lalana maty paika ary ny fifamatorana indray arakaraka ny valiny mety hitranga.
Avy eo manorata fotom-pahalalana izay azon'ny mpanampy AI ampidirinao mba hamenoana tsara ireo fifampiresahana ireo. Arakaraky ny habetsaky ny fahalalanao no miorina tsara kokoa; azonao atao ny mampiditra hafatra mahazatra, fanontaniana napetraka matetika, rohy mahasoa, famaritana vokatra ary maro hafa. Raha afaka mitantana atiny multimédia ny sehatra chatbot anao, azonao atao koa ny mandamina ireo fananana hita maso amin'ny fahalalanao. Ohatra, ny GIF, ny horonan-tsary, ny sticker, ny sary, ny bokotra, ary ny endrika atiny media hafa manankarena dia afaka mamelona ny resadresaka ifanaovan-dresaka ary mahatonga azy ireo hivoaka avy eo amin'ny efijery.
Ny atiny amin'ny haino aman-jery manan-karena dia manampy amin'ny fampidirana am-panafenana ireo mpiresaka mahira-tsaina miaraka amin'ny toetra amam-panahy ary miteraka fanandramana tsy hay hadinoina ho an'ny mpanjifa, saingy tadidio foana ny tanjon'ny resaka. Ny laharam-pahamehana momba ny tanjon'ny mpanjifanao (sy ny fahaizan'ny mpandraharaha anao) dia hiantoka ny fahafaham-po sy hanampy azy ireo ho any amin'izay alehany; Ny GIF sy ny sticker dia tokony ho ny molotra mofomamy.
3. Halaviro ireo fandrika iraisan'ny mpanampy amin'ny chat
Iray amin'ireo tombony lehibe indrindra ananan'ny mpanampy amin'ny chat marani-tsaina ny fihatsarany ara-potoana. Ireo mpiasan'ny herin'aratra dia hianatra amin'ny alalàn'ny traikefa sy hihatsara rehefa mahavita resaka bebe kokoa. Raha io voalaza io dia tsy hevitra tsara mihitsy ny mametraka chatbot tsy voaofana ho an'ny tena mpanjifa. Asaivo mizaha toetra ny maso ivoho ao anaty ny mpiasa alohan'ny hametrahana izany ho an'ny mpanatrika fitsapana malalaka kokoa ary hamoaka izany amin'ny besinimaro. Tokony hanara-maso tsy tapaka ny zava-bita ianao ary hanangona fanamarihana mba hahazoana antoka fa manatsara sy mianatra tokoa ny masoivohonao, eny fa na dia aorian'ny fandefasana azy aza.
Raha te hanara-maso tsara ny maso ivoho manan-tsaina anao dia manapaha hevitra momba ny refin'ny fampisehoana izay hozahanao hatramin'ny andro voalohany. Fantaro ny fomba handrefesanao ny fahombiazanao sy hamantaranao ny KPI toy ny fifampiresahana tanteraka, ny tahan'ny fifamofoana, ny faharetany ary ny taham-panolorana sy ny fihemorana. Izany dia hanampy anao hamorona ny arofanina ho an'ny mpandraharaha anao hanatsara hatrany ny tanjona kendreny, ary hitodika hatrany amin'ny fahalavorariana amin'ny chat.
Na toy inona marina ny fahitan'ny agents AI anao, indraindray ny mpanjifa dia mila rindrambaiko hafa amin'ny karazana fifandraisana hafa. Alefaso amin'ny mora am-paosy ny varotra, mpandraharaha mivantana, na koa adiresy mailaka natokana mba hamoronana tetezamita mora sy tsy misy tohika ary hisorohana ny fahasosorana na ny fidinan'ny mpanjifa. Na ny eny ivelany aza dia tokony hanampy ny mpanjifa hanatratra ny tanjony voalaza ary hamindra azy ireo amin'ny fantsona.
Na inona na inona indostria misy anao ary na iza na iza ny mpanjifanao, ny fikolokoloana chat amin'ny fomba marani-tsaina dia fomba mahery iray handefasana traikefa mahazatra izay niova fo.
Tags: aiai mpanampyfahaizana artifisialyBotbotcoBotco.aihiresakampiasan'ny chatmpanampy amin'ny chatmarketing amin'ny chatresaka fikolokoloanachatbottandroka fivarotana